M.degmada Mahadaay oo ka hadlay Xaaladda Amniga iyo Biyaha uu keenay Wabiga Shabeelle – idalenews.com
Guddoomiye ku-xigeenka Arrimaha Bulshada degmada Mahadaay ee Gobolka Shabeellaha Saalax Fuloow Xaaji oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa ka warbixiyay Xaaladda Amniga degmada Mahadaay iyo Biyaha uu keenay Wabiga Shabeelle oo mara qaar ka mid ah deegaanada Gobolka Shabeellaha dhexe.
Mudane Saalax Fuloow Xaaji,Guddoomiye ku-xigeenka Arrimaha Bulshada degmada Mahadaay ayaa sheegay in xaaladda Amni ee degmada Mahadaay ay wacan tahay lana mid tahay degmooyinka kale ee Hirshabeelle,isagoona dhanka kale ka hadlay Biyaha uu keenay Wabiga Shabeelle oo ku dhawaad labo billood gursanaa ama Biyo la’aan ay ka jirtay.
Wuxuu tilmaamay in cabsida ugu badan hadda ay ka jirto fatahaad laga yaabo inuu deegaanada qaar ka sameeyo Wabiga Shabeelle oo biyo badan keenay.
Guddoomiye Saalax Fuloow Xaaji ayaa ku taliyay in la helo Keydadka Biyaha ee Gobolka Shabeellaha dhexe si looga baaqsado Biyo la’aan xilliyada Wabiga uu guro laguna dhimo marka Wabiga uu biyo badan keeno.
Sidoo kale,Guddoomiyaha ayaa hoosta ka xariiqay in Shacabka degmada Mahadaay ay ku mashquulsan yihiin tacbashada Beeraha,Waxbarashada iyo howlaha kale ee muhiimka u ah noloshooda,wuxuuna cadeeyay in waxa keliya ay u baahan yihiin ay tahay in laga kaalmeeyo dhanka helida mashaaariicda kala duwan ee dhanka horumarinta.
Kumanaan qoys oo noloshoodu ay ku xirneyd Biyaha Wabiga ayaa ku farxay inay arkaan biyaha wabiga,waxaana arootii hore ee maalintii Axada ahayd u daawasho tagay Wabiga Jowhar dad aad u fara badan oo u hamuun qabay dib u soo noqashada Biyaha Wabiga.
Maamulka Gobolka Shabeellaha dhexe iyo kan degmada Jowhar ayaa wada dadaalo dib loogu dayactirayo biyo xireenka Sabuun si looga hortago fatahaad uu sameeyo Wabiga Shabeelle.
X. ilaaliyaha Guud ee Qaranka oo Xafiiskiisa ku qaabilay safiirka Turkiga ee Soomaaliya